Muhaajiriin badan oo laga yaabo ineey si dhuumaaleysi ah dalka ugu noolaadaan | Somaliska
Laanta socdaalka ee dalkaan Iswiidhan ayaa aaminsan in go’aanada diidmada ah ee ay siisay in badan oo ka mid ah muhaajiriinta dalkaan ku soo qul qulay mudooyinkii ugu dambeeyey ay keeni karto ineey dalka iskaga hayaamaan. Su,aashuse waxeey tahay sidee buu noqon doonaa kuwa iyaga go’aansaday ineey dalkaan joogaan misna aan heeysan sharci deganaansho?.
Madxafdka weyn caalamiga ee ku yaala magaaladda Göteborg, ayaa maanta lugu qabtay siminaaro looga munaaqishooniyey siyaasadda muhaajiriinta ee dowladda iyo dhibaatooyinka ku heereysan. Siminaarkaan oo ay ka soo qeyb galeen dhaqtiir, garyaano iyo qorayaal ayaa kaga munaaqishooday siyaasada cusub ee dowladda ee la xirriira muhaajirinta. Waxaa aqoonyahanadu sheegeen in aaminsan yihiin in dad lugu qiyaasay 50 kun marka loo diido sharciga dganaanshaha in badan oo iyaga ka mid ah dalka ku dhuumaaleeysan doonaan iyagaa ka baqaya in dib loogu celiyo halkii ay ka yimaadeen ama dalalkoodii.
Gabadha lugu magacaabo Lina Lönnberg oo madax ka ah hey’adda Rosengrenska stiftelsen oo kulankaasi soo qaban qaabisay ayaa sheegtay in bulshadda laga doonayo ineey diyaar u noqoto cadadka sii kordhaya dadka aan heeysan sharciga ee dhuumaaleeysanaya. Waxaa ay tilmaantay in aaneey xaq u laheyn in dadkaasi lugu ilaawo nolosha adag haddii xitaa beey tiri aannu qabaneyn baaqyadii caalmiga ee xaquuqulsaan-ka. Ugu dambeyntii waxaa ay ku baaqday Lina in dadkaasi farahoodu maran yihiin ay muhiim tahay siddii loo qaabili lahaa.
Muhaajiriinta loo diido sharciga dganaanshaha ayaa qaar ka mid ah waxaa ay danta ku qasabtaa ineey dhuumaaleeysi ku joogaan dalka, halka qaar kalena qasab looga musaafuriyo.
Dowladda Iswiidhan oo soo bandhigtay qorshahayaal ka dhan ah dadka sharciyadda loo diiday
Hej jag heter sadik,mohamed ali men jag vängar på min medborgare